Wafdigii Jabdadda ONLF oo ku wajahan Jigjiga - Halbeeg News
ADDIS ABABA(HALBEEG)-Wafdigii Jabhadda Waddaniga Xoreynta Ogadeeniya (ONLF) ee shalay soo gaaray magalaada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya ayaa la filayaa in maanta ay u kicitimaan magaalada Jigjiga ee xarunta ismaamulka Soomaalida.
Afhayeenka urururka ONLF, Cabdulqaadir Hirmooge Caddaani ayaa sheegay in wafdiga socdaalka uu ku tagayo gobolka Soomaalida ay ku wehlin doonaan masuuliyiin heerar kala duwan leh kuwaasoo u xil saaran maamuuska iyo soo dhaweynta wafdiga.
“Maanta ayay wafdigu u kicitimi doonaan Jigjiga, garoonka kubadda cagta oo loo diyaariyay soo dhaweyntooda ayayna isugu tagi doonaan” ayuu yiri Hirmooge.
Afhayeenka ayaa sheegay in ururku ay hor yaallaan howlo iyo qorshayaal mug leh kuwaasoo u baahan in la fuliyo xilliyo loo qorsheeyay oo kala geddisan.
“Qorshayaal waaweyn oo horumarineed ayaa jiri doono, kuwaasi oo ay ku jiraan shirar lagu mideynayo xoogagga siyaasadeed ee Soomaalida iyo xafiisyo laga furayo deegaanka” ayuu hadalkiisa sii raaciyay afhayeen Hirmooge.
Afhayeenka wax faah faahin ah kama uusan bixinin howlaha ay qabanayaan xafiisyada uu tilmaamay in jabhaddu ay ka furaneyso deegaanka.
Dhawaan wadahadal ay magaalada Asmara ee dalka Eritrea ku wada yeesheen Jabhadda ONLF iyo dowladda Itoobiya ayay ku wada gaareen heshiis nabadeed ay labada dhinac isku afgarteen in dhammaan khilaafaadka jira lagu dhameeyo miiska wada hadalka.
Todobaadyadan magaalada Jigjiga ee xarunta ismaamulka Soomaalida waxaa kusii qul qulayay siyaasiyiin iyo dagaalyahanno ka tirsanaa ururka ONLF oo muddo dheer ka maqnaa dalka kadib heshiiskii dhex maray ururka iyo dowladda dhexe ee Itoobiya.
Isbadal siyaasadeedka ka curtay dalka Itoobiya ayaa suura galiyay inay dalkaasi dib ugu soo noqdaan boqollaal dadweyne ah oo horay uga biya diiday maamulkii qallafsanaa ee muddada dheer dalkaasi ka talinayay.
Gobolka Soomaalida ee dalka Itoobiya ayaa ka mid ah gobollada sida weyn ugu diirsaday isbadalka ka dhacay Itoobiya iyada oo haatan laga dareemayo saan saan nabadeed iyo xasilooni siyaasadeed oo uu gobolku galay.